Madaxweyne C/Casiis Butafliiqa oo ku dhawaaqay go’aan shacabka dalkiisa ku farxeen. – Xeernews24
Madaxweyne C/Casiis Butafliiqa oo ku dhawaaqay go’aan shacabka dalkiisa ku farxeen.
Madaxweeynaha gaadhiga lagu riixo ee Dalka Algeria Cabdicasiis Butafliiqa ayaa ka tanaasulay inuu tartamo Doorashada dalkaas markii 5aad, kadib markii dalkaasi ay gil gileen banaan baxyo looga soo horjeedo in mar kale uu tartamo.
Go’aankan cusub ee Madaxweyne Butafliiqa ayaa yimid kadib markii uu shalay kusoo laabtay dalka Algeria uu arimo caafimaad uga maqnaa ,waxaana Madaxweynaha mudooyinkii ugu dambeeyay hayay xanuun u diiday in uu dalkiisa ku sugnaado.
Madaxweyne Butafliiqa tanaasulkiisa ayaa kusoo aaday xili Shacabka dalkaasi sii kordhiyeen banaan baxyada ay uga soo horjeedaan in Madaxweynaha bukaanka ah uu mar kale talada dalkaasi qabto.
Doorashada Madaxweynaha dalka Algeria ayaa horey loo qorsheeyay in ay dhacdo 18-ka Bisha Apriil ee Sannadkaan 2019, waxaana suurto gal ah in dib u dhac kooban ku yimaado xiliga la qabanayo doorashada.
Shacabka dalka Algeria ayaa ku farxay go’aanka kasoo baxay Madaxweyne Cabdicasiis oo hada ah bukaan gaadhiga curyaanka lagu wado, waxaana la ogeyn in go’aankan cusub ee Madaxweynaha uu joojin karo banaan baxyada socda.
Madaxweynaha Dalka France Emmanuel Macron iyo madax kale ayaa soo dhaweeyay go’aanka Madaxweynaha dalka Algeria uga hadhay doorashada la filayo in dhawaan dalkaasi ka dhacdo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/03/bouteflika.jpg 450 1048 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-03-11 22:37:392019-03-11 22:37:39Madaxweyne C/Casiis Butafliiqa oo ku dhawaaqay go’aan shacabka dalkiisa ku farxeen.
Daawo Qaabka qurxoon ee madaxwaynaha dalka Fransiiska loogu soo dhaweeyey J... Liyuu Police-kii Harar oo Hubka laga dhigay iyo milateriga oo magalada Lawa...